Cajiib Dil laga Been Abuuray Wariya Caan Ah Oo Lagu Badbaadiyay Dad Badan – V O S
sida aan kasoo xiganay BBC da Arkady Babchenko oo ah wariye u dhashay dalka Ruushka ayaa indhaha caalamka qabsaday dhamaadka bishii May ee sanadkan, kadib markii isaga iyo laamaha ammaanka ee dalka Ukraine ay ka been shegeen dhimashadiisa.
Mr Arkady ayaa waxaa uu ka shekeeyay wixii xiligaasi dhacay, isagoo na tilmaamay in nin katirsanaa madhabta qibdiyiinta oo lagu magacaabo Oleksiy Tsymbaliuk uu qeyb ka ahaa qorshaha ay malegeen ciidammada ammaanka ee Ukraine, kaasi oo ay shegeen in looga hortagayay dilal qorsheysanaa.
Ciidammada Ukraine ayaa waxaa ay shegeen in arrintan ay u sameyeen, si loo fashilo doorka Ruushka uu ku leeyahay dilalaka qorsheysan ee ka dhanka ah siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda.
Dhamaadka bishii May ayay aheyd markii warka ku saabsan in wariye Arkady Babchenko oo ahaa nin aad u dhaliila siyaasadda madaxweyne Putin la sheegay in la dilay, waxaana laga warhelay isagoo ku dhexjira barkad lagu qubeysto oo ku taala guri uu ka degenaa magaalada Kiev ee dalka Ukraine.
Xiliga la sameynayay dilka been abuurka ah waxaa warbaahinta caalamka qabsaday sun la qaadsiiyay nin u dhashay dalka Ruushka iyo gabar uu dhalay oo lagu sumeeyay magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska, taasi oo keentay in dadku ay u fasirtaan in arrintan uu Ruushka ku lug leeyahay.
Saacado un kadib, dhimashada laga been abuuray ee wariyaha ayaa waxaa ku kadsoomay golaha ammaanka ee Qaramada midoobay oo ka hadlay, waxaase la yaab noqotay markii ra’iisul wasaraaha Ukraine uu dalka Ruushka ku edeeyay dilka weriyaha, taasi oo markii dambe wajigabax ku noqotay xukuumadda dalkaasi, kadib markii weriye Arkady uu ka soo muuqday shir jaraa’d isagoo badaqaba.
Haddab baaritaan ay BBC-du ku sameesay arrintan ayaa lagu ogaaday waxyaba badan oo ku saabsan qaabka ay wax u dhaceen.
Haddii uusan aheyn Oleksiy Tsymbaliuk, waxay u muuqan laheyd in la dili lahaa weriye Arkady Babchenko oo lagaa ba yaabo in loo adeegsan lahaa dad kale oo khaarajiya.
Horantii sanadkan ayaa Mr Oleksiy Tsymbaliuk waxaa lasoo xiriiray ninka sawirkiisu uu hoos ka muuqda oo ay horay isu yaqiinen, kaasi oo katirsanaa shirkad sameysa hubka oo lagu magacaabo Borys Herman.
Waxaa uu sheegay in ninkan uu ka dalbday inuu dilo dhowr qof oo uu sheegay inay yihiin dad cadaw ah, waxaana intaa loo raaciyay in dhaqaalihii lagu fulin lahaa dilalka ay diyaar yihiin.
Mr Oleksiy Tsymbaliuk oo fahansan xaaladda ayaa isago muusoonaya waxaa uu aqbalay dalabkii, waxaana markii dambe uu maclumaadka ku saaban arrintan uu la wadaagay laamaha ammaanka ee dalka Ukraine.
Hasayeshee ciidammada Ukraine ayaa iyagoon cidna la wadaagin arrinkan waxaa ay go’aansadeen inay sameyaan qaab lagu been abuuri karo dilka mid kamid ah dadka la bartilmaameedsanayay, si loo soo qabto kuwa raba inay dilka geystaan iyo qorshahooda.
Booliska dalkaasi ayaa markii dambe waxaa ay xiriir dhaw la sameyeen ninka loo soo igmaday inuu wax dilo, si loo ogaado waxa ay damacsanyihiin.
Markii uu soo baxay warka sheegaya in wariyihii la dilay aya ninka loo igmaday inuu dilka fuliyo waxaa uu farrin qoraaleed u diray ninkii maleegayay dilka, isagoo na u sheegay inuu fuliyay dilka, waxaana qorshuhuu uu ahaa inay kulmaan isaga iyo Oleksiy, si looga wada hadlo waxa hagaagay iyo qorshaha xiga ee lagu khaarajinayo dhowrka qof ee kale.
Meel katirsan magaalada Kiev ayay ku ballameen, hasayeshee Mr Oleksiy Tsymbaliuk ayaa ku wargeliyay ciidammada SBU-da ee Ukraine waxa dhexmaray isaga iyo ninka ay ballameen.
Booliska Ukraine ayaa markii dambe gacanta kusoo dhigay ninka hoos idin kaga muuqda ee doonayay in la dilo dhowrka qof, waxaana sidaasi lagu badbaadiyay dhowr qof oo qorshuhu ahaa in la dilo, iyadoo la adeegsnaayo dad kale.